तिथि मेरो पत्रु » तपाईं एक Boomerang प्रेमीले डेटिङ गर्दै?
तपाईं एक Boomerang प्रेमीले डेटिङ गर्दै?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 21 2020 |2मिनेट पढ्न
"उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ. उहाँले मलाई छैन प्रेम गर्नुहुन्छ। "—बेनामी
हरेक केटी यो मान्छे मिति छ. उहाँले बहार मा एलर्जी रूपमा साधारण छ. महिलाहरु, तपाईं लिपि थाह ...
उहाँले सोच घाँस अन्य पक्षमा greener थियो. वा उहाँले "आफ्नो ठाउँ चाहिएको छ।" त्यसैले, धेरै चेतावनी बिना, उहाँले पनि Houdini गर्व बनाउन भनेर एक गायब कार्य गर्छ.
तपाईं रुन. तपाईं किन प्रश्न. त्यसपछि अन्ततः, तपाईं बीच केही समय र दूरी संग, तपाईं आफ्नो मनलाई निको पार्न र मा सार्न व्यवस्थापन.
आफ्नो आश्चर्य धेरै, महिना / वर्ष पछि उहाँले फिर्ता. रातो गुलाब यो समय, क्षमा लागि बिन्ती, र जलिरहेको इच्छा पुराना ज्वालाले पुनः जगाउन. थुप्रै पटक, तपाईं नयाँ कसैले चासो बन्न गरेपछि.
यो 64,000 प्रश्न हुन्छ ... तपाईं उसलाई फिर्ता लिन गर्नुपर्छ, वा तपाईं भविष्यको लागि बढी टाउको दुखाइ र वेदना को लागि हो?
खैर, यो सबै निर्भर ....
यहाँ एक दिशानिर्देश प्रयोग गर्न धोखा च्यादर'S.
उहाँले डेटिङ को प्रमुख नियम को एक तोड्न गरे? यी आफ्नो सबै भन्दा राम्रो साथी वा नातेदार संग चोरेर जस्तै कुनै-नं हुनेछ, वा शारीरिक हिंसा, वा आफ्नो भरोसा उल्लंघन. भने त, "जाने पारित छैन।"
उहाँलाई परिपक्व र के भयो संग सर्तहरूको आएको लागि पर्याप्त समय भएको छ? उहाँले साँच्चै आफ्नो तरिका को अरे िचन्न? अथवा परिचित केहि लागि सायद बस तिर्सना छ?
किन उनले सम्बन्ध नवीकरण गरिदियो गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं को दुई बीच रसायन एक पटक तातो थियो किनभने? उहाँले रहन पैसा वा एक ठाउँ उधारो आवश्यक छ? सुविधा पुनर्मिलन एक राम्रो कारण कहिल्यै छ. आफ्नो फिर्ता आउँदै नदेऊ तपाईं को लागि एक झटका रूपमा सेवा.
उहाँले कुराहरू अन्त कसरी? आफ्नो पद्धति चिसो र कठोर थियो? अथवा दयालु र गैर-दोष? उदाहरणका लागि, अचानक सबै फोन सम्पर्क अन्त्य गरेर कायर गरेको मार्ग लिने मान्छे, वा कुराहरु फेरि संग hooking शायद लायक छन् छेउसम्म पाठ्य सन्देश पठाउन.
अधिक राम्रो कुरा उहाँलाई बारेमा खराब थिए? एक भला र विपक्ष सूची त्यसपछि बुद्धिमानी र निष्पक्ष यो सल्लाह बनाउन. सबैभन्दा महत्वपूर्ण, माया Angelou को ऋषि सल्लाह पालन: मान्छे तपाईं देखाउँदा "उनीहरू जो, तिनीहरूलाई विश्वास गर्छन्। "
आफ्नो टुक्रिन को आसपास परिस्थिति समयावधिबारे छ रूपमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण. उहाँले क्रिसमस अघि सही बाहिर जमानत गरे? तपाईं आफ्नो भाग्य मा तल बिरामी वा भए पछि? "उचित-weathered मित्र" जो मानिसहरू शायद कठिन समयमा मा गणना गर्न सकिन्छ. आफैलाई भाग्यशाली विचार बाहिर पाएको, त्यसो हो भने. आफ्नो घाटा कटौती.
अझै पनि शैंपेन चश्मा बाहिर तोड छैन. संग एक "कालावधि" मा उहाँलाई फिर्ता लिने विचार "सीमित पहुँच।" इष्टतम परिणाम लागि, भरोसा "कमाएका" गर्नुपर्छ ग्रहण छैन.
तपाईं तोड जब, मा chiming मान्छे को एक कोरस थियो, "म त तपाईं भन्नुभयो?" सबैलाई अरू उहाँले तपाईंलाई अयोग्य भन्ठानेको भने, एक बिन्दु यहाँ हुन सक्छ. हल्कासित यस खारेज नगर्नुहोस्. प्रेम अन्धो हुन सक्छ तापनि, यो पनि अनिश्चित हुनु हुँदैन.
तपाईं फेरि आफ्नो विवेक र आत्म-सम्मान जुआ खर्च गर्न सक्छन्?
एक मौका ले एक खराब जुआ हुन सक्छ पल्ट जब स्पष्ट छन्. तपाईं होनहार क्षमता छ भन्ने अर्को सम्बन्धमा हाल हुनुहुन्छ? यस अवस्थामा, यो "फिर्ती बच्चा" फिर्ता आउन अनुमति हुँदैन!
यो Boomerang प्रेमीले व्यवहार गर्न यी समसामयिक सुझाव विचार. "विगतमा सिक्न असफल गर्नेहरूले यो बारम्बार किस्मत छन्।" भन्ने कुरा मनमा राख्दै
12 श्रीमती को लागि अमीर पर्छ. सही
सम्बन्धमा राम्रो सङ्घर्ष जस्तो कुनै कुरा छ?
एक मानिसको अय्यूब रोमान्टिक व्यक्तित्व प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ